Network Classes — MYSTERY ZILLION
Network classes တွေကိုဒီလိုခွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ် ....
CLASS A __ 1 to 126 (255.0.0.0)
CLASS B __ 128 to 191 (255.255.0.0)
CLASS C __ 192 to 223 (255.255.255.0)
CLASS D __ 224 to 239 (Reserved for multicasting)
CLASS E __ 240 to 254 (Experimental used for research)
အဲဒီမှာ 127.0.0.0 to 127.255.255.255 ထိဟာ [FONT=&quot]loopback and diagnostic functions[/FONT] တွေအတွက်လို့သိရပါတယ် .. အဲဒီ [FONT=&quot]loopback and diagnostic functions[/FONT] တွေဆိုတာဘာတွေလဲ ဘယ်မှာသုံးတာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
CLASS A __ 10.0.0.0 (255.0.0.0)
CLASS B __ 172.16.0.0 to 172.31.0.0 (255.255.0.0)
CLASS C __ 192.168.0.0 (255.255.255.0)
အဲဒီ private IP တွေကိုလဲဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ် .. ရှင်းပြပေးကြပါ ... ဆွေးနွေးပေးကြပါဗျာ ...\_:D/
Private IP တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Local ထဲမှာသုံးဖို့အတွက်ပဲခင်ဗျ .... ကို့ရဲ့ Local ထဲကို တစ်ခြားကနေမမြင်နိုင်အောင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား network ကနေ attack မလုပ်နိုင်အောင် ပေးထားတာတွေဗျ ... Public IP တွေကိုသာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတိုင်းမှာ သုံးရင်တော့ အခုထပ်ထွက်ထားတဲ့ IPV6 တောင်လောက်မှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ ... Public Ip တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ MPT နဲ့ Teleport တို့မှာပဲရှိတယ်လေ .... Private Ip တွေကဘာလည်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာထက် သေချာ ကြည်ချင်ရင်တော့ အောက်က link မှာ ဘာသာပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ ..
Class A ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network (N)ပေါင်း 2^8 = 255
ကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ network ရဲ ့အောက်မှာ ကွန်ပျူတာပေါင်း (n)
255 x 255 x 255 =16581373 လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Class B ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network (N)ပေါင်း 255 x 255 =65025
255 x 255 = 65025 လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Class C ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network (N)ပေါင်း 255 x 255 x 255 =16581373 ကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ network ရဲ ့အောက်မှာ ကွန်ပျူတာပေါင်း (n)255 လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
(IP address မှာ 192.168. တွေပဲ ဘာလို ့ဖြစ်နေရတာလဲ လို ့မကြာခဏ အမေးခံရပါတယ်။ကိုယ်သုံးမယ့်ကွန်ပျူတာ အရေအတွက်(node)ဟာ ၂၅၅ လုံးကို မကျော်ဘူး ဆိုရင် Class C ကိုပဲ သုံးကြလို့ပါ။)
နောက်တစ်ခုကတော့ node မှာ decimal no:0နဲ့255 ကိုထည့်လို ့မရပါဘူး။(ဥပမာ- 192.168.1.0* / 192.168.1.255* )
IP address မှာ node portion all Ones (11111111)=255 က Broadcast Address ဖြစ်ပါတယ် ။
IP address မှာ node portion all Zeros(00000000)=0 က Network Address ဖြစ်ပါတယ် ။
127.0.0.1 က ကိုယ့် Computer က Network Card ကို ကိုယ်စားပြုတယ် Bro.
Ping 127.0.0.1 ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Network Card ကို ပြန်ပြီး Ping လုပ်တာပါပဲ။ တခါတလေ Network မရတော့ရင် ... ကိုယ့် Network Card ကများပျက်တာလားဆိုပြီးပြန်စမ်းကြည့်ရသေးတယ်။ Reply ရရင်တော့ ကောင်းသေးတယ်ပေါ့။ Request Time Out ဆိုရင်တော့ ... နောက်တစ်ကတ်ပေါ့ ....
Private IP တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Local ထဲမှာသုံးဖို့အတွက်ပဲခင်ဗျ .... ကို့ရဲ့ Local ထဲကို တစ်ခြားကနေမမြင်နိုင်အောင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား network ကနေ attack မလုပ်နိုင်အောင် ပေးထားတာတွေဗျ ...
အကိုပြောသလိုဆိုရင် VPN တွေက private IP တွေသုံးထားတာလားဟင် .. မသိလို့နော်
ဟုတ်ကဲ့ VPN တွေမှာ Private IP သုံးပါတယ်ခင်ဗျာ ..
Ping 127.0.0.1 ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Network Card ကို ပြန်ပြီး Ping လုပ်တာပါပဲ။
Ping 127.0.0.2 ဆိုလို ့Reply ပြန်ရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို။
ping 127.0.0.2 ဆိုလို ့reply ပြန်ရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို။ :d
တူတူပဲလေ.....127.0.0.1 ကနေ 127.255.255.254 ထိ အဲဒီအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်....
ပာုတ်ကဲ ့။ 127.255.255.255 ထိ ဘာလို ့မရတာလဲ ဗျာ။
127.255.255.255 အဲဒါက brocast လုပ်တဲ့ ip မို့လို့ပါ .. ဆိုလိုတာက အဲဒီ 127 network မှာရှိတဲ့ စက်အားလုံးကို brocast လုပ်ဖို့ပါ ... 127.0.0.0 ဆိုရင် တော့ 127 network တစ်ခုလုံးကို ဆိုလိုတာပါ .. သိသလောက်လေးပါ . မှားရင်လည်းသိတဲ့သူများ ၀င်ပြောပေးပါခင်ဗျာ
ပာုတ်ကဲ ့။ Network တစ်ခုမှာ Broadcast လုပ်တဲ ့IP ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ပါလဲ ခင်ဗျာ။
Class A ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network ပေါင်း (2^7)-2=126 ကိုသုံးနိုင်ပြီး အဲဒီ network ရဲ့အောက်မှာ ကွန်ပျုတာပေါင်း (2^24)-2=16,277,214 လုံးတပ်ဆင်သုံးပြုနိုင်မှာပါ....
Class B မှာတော့ Network ပေါင်း =2^14=16,384 နဲ့ Network တစ်ခုစီမှာ သုံးနိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာပေါင်း( 2^16)-2=65,534 ပါ....
Class C မှာလည်းဒီလိုပါပဲံ သုံးနိုင်တဲ့ Network ပေါင်းက 2^21=2,097,152 နဲ့ အဲဒီ Network တစ်ခုစီ အတွက် ကွန်ပျုတာ အလုံးရေ...28^2 = 254 လုံးကိုသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်....
အပေါ်ကတွက်ပြတဲ့ထဲမှာ ကွန်ပျုတာအရေ အတွက်ကို2နှုတ်တာ အဲဒီအတွက်ပါ.....
:5:သိပ်ကြီး သိလို့မဟုတ်ပေမဲ့ သိသလောက်၀င်ပြောတာပါ:D
မ Nawlulu ပြောသွားသလိုမှတ်ထားလို့ရပါတယ်...
ပာုတ်ကဲ ့ကျွန်တော်ထင်တယ် အဲဒါက Classful IP address အတွက် Default Broadcast IP address ပါ။
အကယ်လို့Classless IP address အတွက်ဆိုရင် Broadcast IP address သည် *.*.*.255 နဲ့ဆုံးမှာ မပာုတ်တော ့ပါဘူး။
အင်းဟုတ်ပါတယ် Subnet ခွဲထားတယ်ဆိုရင်တော့အကိုပြောသလို နောက်က 255 နဲ့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်လည်း အဲလို Subnet ခွဲထားတဲ့ Network အတွက်လည်း Brocast Ip ကိုတွက်လို့ရပါတယ် ...
အပြင် Network သင်တန်းတွေ တက်ဖူးရင် တော့တွက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ..
subnet ခွဲထားတဲ့ network အတွက်လည်း brocast ip ကိုတွက်လို့ရပါတယ် ...
အပြင် network သင်တန်းတွေ တက်ဖူးရင် တော့တွက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် .. :d
အဲဗျာ။ ကျွန်တော် အပြင်သင်တန်းမတက်ထားဖူးဆို၇င် မတွက်တတ်တော့ဘူးထင်တယ်။ သွားတက်လိုက်အုန်းမှာပဲ။ lol
ဟုတ်တယ်ဗျို ့သူတို ့ပြောသလိုပဲ ပြင်ဖတ်လိုက်ကြတော့ အတွက်မှားသွားတယ်:27:
သိသူမပြော၊ပြောသူမသိ။ မသိ၍ပြောသည်မှတ်:p(မသိဘဲပြောတော့ တစ်လွဲတွေချည်းပေါ့ဟိ)
အဟဲ ကျွန်တော်ပြောတာ မှားသွားတယ်ထင်တယ် အဟီး ဆောရီးဗျာ သင်တန်းတက်မှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လေ့လာလဲ တွက်တတ်နိုင်ပါတယ် .. တက်ဖူးရင်တွက်တက်မယ် မတက်ဖူးရင်လည်း တွက်တက်ချင်တွက်တတ်ပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောရမယ်မ သိပါ ကို့ဘာသာကိုယ်တောင်လည်နေပြီ :d .. ကျွန်တော်လည်း အိုင်ပီတွေကို စိတ်၀င်စားတယ် .. ကိုယ်သိသလောက်လေး ပြောကြတာပေါ့ ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ MZ ၀ိုင်းတော်သားတွေရော Member တွေရော အားလုံးကို...:103: